अघिल्लो सातामात्र भारतबाट आएका थिए कपिलवस्तुका तीनै जना कोरोना संक्रमित – Khabar Silo
अघिल्लो सातामात्र भारतबाट आएका थिए कपिलवस्तुका तीनै जना कोरोना संक्रमित
३ जेठ, काठमाडौं । कपिलवस्तुमा थपिएका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का तीन जना संक्रमित एक साताअघि भारतबाटै लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शिवराज नगरपालिकाका २५, ३४ र ४४ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३४ वर्षका पुरुष वडा नम्बर ११ का हुन् भने २५ र ४४ वर्षका पुरुष वडा नम्बर ८ का हुन् ।
भारतको मुम्बईबाट आएका उनीहरु लकडाउनको समयमा लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
‘एक जना २५ गते आएका थिए । अर्का एक २७ गते र तेस्रो व्यक्ति २८ गते विहान आएका थिए । दिउँसो उनको स्वाब संकलन गरेर पठाइएको थियो’ शिवराज नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामणि भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनीहरुलाई पुराना छाला कारखानामा बन्दै गरेको सुपा देउराली रिसोर्टको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
कोरोना संक्रमण पाइएपछि अब दाङको बेलझुण्डी कोरोना अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
Posted on March 1, 2021 March 1, 2021 Author khabar silo
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा भिडियो ! दुवै हात खुट्टा न’चल्ने बिक्रम संग मनुले गरिन् बिहे, इन्द्रेणीले जुरायो दुबैको जोडी पछिल्लो समय सबैको मन जितेको जोडी हो मनु र बिक्रमको उनीहरु अन्त’रजातीय बिबाह गरेर मात्रै हैन मनुले बिक्रमको सेवा गरेपछि उनीहरु सबैको न’जरमा परेका थिए। बिक्रम सवारी दुर्घ’टनामा परि अ’न्तिम अबस्थामा थिए भने मनुले […]
काठमाडौँ– भारतले कोरोना संक्रमण धेरै भएका ठाउँमा पूर्ण लकडाउन जारी राख्ने भएको छ । चरणवद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लगेको भारत सरकारले अब सङ्क्रमित धेरै भएका क्षेत्रमा अगष्ट ३१ अर्थात् भदौ १५ गतेसम्म नै लकडाउन गर्ने भएको छ । सङ्क्रमित कम भएका ठाउँमा भने लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने निर्णय गरेको हो । यस्तै भारतले लगाउँदै […]
आज भेटिएकी कोरोना संक्रमित चितवनकी महिला काठमाडौंमै रहेको खुलासा,तर कुन ठाउमा ?(भिडियो हेर्नुहोस)